Laser Cutting Matshini, Laser ngentlabo Machine, Galvo Laser Machine - Golden Laser - 体彩会开欧洲杯,在线买猜球平台软件,体彩竞彩网世界杯冠军
Wamkelekile laser OMKHULU
Laser OMKHULU ijolise ekunikeni ezikrelekrele, yedijithali, kunye nezisombululo laser automated.
Umenzi weenkqubo ze-laser zokusika, ukukrola nokumakisha. IngcaliCO2 laser ukusika umatshinikunyeGalvo laser umatshini.
Ukusuka kokubonisana kuqala ukuya kuvavanyo lwesicelo kunye nezinto zakho eziyilelwe kumzi-mveliso othile kuqeqesho lwabasebenzisi nakwinkonzo yehlabathi-IGOSA YASE-GOLDEN ibonelela ngezisombululo ezibanzi zelaser, hayi umatshini omnye kuphela!
Umzekelo No .:JMCCJG / JYCCJG Series
Umzekelo No .:JMCCJG-350400LD
Icebo lokucoca ulwelo I-Laser Ukusika Umatshini weShishini lokucoca ulwelo
Ukuchaneka okuphezulu kwezixhobo kunye nokuqhutywa kwirack. Isantya sokusika ukuya kuthi ga kwi-1200mm / s. CO2 RF laser 150W ukuya 800W. Inkqubo yokuhambisa umbane. Isondli esizenzekelayo ngokulungiswa kwempixano. Ifanelekile ukusika ilaphu lokucoca ulwelo, amacwecwe okucoca ulwelo, ipholiyesta, i-PP, i-fiberglass, i-PTFE kunye neendwangu zeshishini.
Umzekelo No .:JMCZJJG (3D) -250300LD
Umzekelo No .:JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Umatshini wokusika weLaser weLaser omde
IbhediyokuSikaeyiNdawoubukhulu beebhedi zezinto ezongezelelweyo ezongezelelweyo, ezinjengentente, iirayile, iparashute, iparaglider, i-canopy, i-marquee, i-awning, i-parasail, i-sunshade, iikhaphethi zokuhamba ...
Umzekelo No .:JMCZJJG (3D) 170200LD
Umzekelo No .:ZJJF (3D) -160LD
Inkqubo ye-3D enamandla ye-Galvo, egqiba ukukrola okuqhubekayo kwinqanaba elinye. "Kubhabho" itekhnoloji ye-laser. Ifanelekile ifomati enkulu yelaphu, eyolukiweyo, yesikhumba, yedenim, ukukrola kwe-EVA.
Umzekelo No .:ZJ (3D) -9045TB
I-CO2 RF yentsimbi yentsimbi 150W 300W 600W. Inkqubo yolawulo lwe-galvanometer eguqukayo ye-3D. Zenzekelayo phezulu kunye phantsi Z axis. Zenzekelayo shuttle zinc-intsimbi ingxubevange lobusi yokusebenza itafile.
Umzekelo No .:ZJ (3D) -15050LD
I-Galvo Laser Perforating Cutting Matshini yeeDiski zeSandpaper
Umzekelo No .:CJGV-160130LD
Vision laser ilungele ukusika yoshicilelo yedijithali sublimation amalaphu textile zonke iimilo kunye nobukhulu. Iikhamera ziskena ilaphu, zibone kwaye ziqaphele into eshicilelweyo, okanye zichonge amanqaku obhaliso asikiweyo kwaye zisike uyilo olukhethiweyo ngesantya nangokuchaneka.
Umzekelo No .:QZDXBJGHY-160100LDII
Ikhamera yokusika yeLaser yokusika umatshini ozimeleyo
Inkqubo iintloko ezimbini laser ukusika ezimeleyo idityaniswe ngokugqibeleleyo kunye nenkqubo umbono smart, kwaye ngakumbi eliphezulu kwiimfuno processing yemizobo eprintiweyo.
Umzekelo No .:I-MZDJG-160100LD
Ukuchaneka okuphezulu kokubhalwa kwamanqaku ekubekeni kunye nembuyekezo yokubhabha okrelekrele yokusika ngokuchanekileyo i-laser yoshicilelo lwedayi ilogo eprintiweyo, iileta kunye namanani.
Umzekelo No .:CJGV-320400LD
I-laser cutter enkulu yombono ngokukodwa iyimveliso yoshicilelo yedijithali-evelisa amandla angenakuthelekiswa nanto ekugqibezeleni ifomathi ebanzi yedijithali eprintiweyo okanye yemizobo yempahla eboyiweyo, iibhena kunye neempawu ezithambileyo.
Umzekelo No .:LC-350
I-laser yokusika kunye nesisombululo esiguqula ukugqitywa kwelebheli. Umfundi wekhowudi yeQR uxhasa utshintsho oluzenzekelayo kubhabho. Isikhokelo seWebhu se-BST senza ukungasebenzi kunye nokubuyisela umva ngokuchanekileyo ngakumbi.
Umzekelo No .:LC-230
I-LC230 yicompact, ezoqoqosho kunye nomatshini wokugqiba laser wedijithali ngokupheleleyo ngobubanzi bewebhu obungama-230mm. Lukhetho oluhle kakhulu lokubaleka ngokufutshane kwidijithali. Ukunikezela ngotshintsho olungaphezulu kwexesha kwaye akukho ndleko yeplate yokufa.
Sigxile laser ukusika kunye nokukrola izisombululo kuluhlu olubanzi izicelo. Nazi ezinye zezicelo esihlala sisebenza nazo.
Ngobuchwephesha obunamandla bokuyila, iGolden Laser iyakwazi ukubonelela ngoomatshini be-laser kunye nezisombululo, yenza imveliso yakho ibe yinzuzo ngakumbi kwaye ibe yinzuzo.
Njengobuchwephesha bokwenza i-epoch-technology, i-laser ikhula ngeenzuzo ezingenakuthelekiswa nanto, ithatha indawo yeenkqubo zemveli ngakumbi nangakumbi.
zeLaser zeNkqubo zeLaser
zeNcwadana zeNkqubo yeeLaser zeNgcaciso yoMsebenzisi
I-Laser Ukusika Izitikha, kunye nokuGuquka, ukuPhakamisa okuPhezulu kunye nokuSika okuKhethekileyo ...
Laser die umatshini ukusika ngokufanelekileyo ezifanelekileyo iilebhile uguqula digital kwaye indawo imela yemveli die ukusika indlela. Liye laba “yinto entsha” kwintengiso ehambelana neelebheli ...
Jonga iNkqubela phambili yoPhuhliso lweMveliso ngo-2021
U-2020 ngunyaka onzima kuphuhliso lwezoqoqosho kwihlabathi liphela, njengoko ilizwe lisokola ukujongana nefuthe le-COVID-19. Ingxaki kunye nethuba ngamacala amabini. Sisenethemba lokuvelisa…
Amakhadi eKrisimesi eLaser - Iindlela ezintsha zokubhiyozela iKrisimesi 2020
Ukusika amakhadi emibuliso yeLaser kunokudala iziphumo ezininzi ezingalindelekanga, elinde ukuba ufumane. Ukuba unomdla kwi-laser-cut cut cards okanye i-laser-cut cut paper, yamkelekile ukuba uqhagamshelane negoldenaser…
UkuThengiswa kweMveliso ePhambili Ukufuna okuGqwesileyo
Ngamava engama-20 kushishino laser, ngokuqhubekekayo ekuphuhliseni nokusebenzisa iiteknoloji phambili, OMKHULU Laser iye yaba ngumvelisi phambili koomatshini laser kunye amandla ulwenziwo ephucukileyo.
OMKHULU Laser ikunika izisombululo laser ngobuchule kushishino isicelo sakho ethile - ukukunceda ukwandisa imveliso, lula inkqubo processing kunye nokwenza ingeniso.
Kwimarike yaphesheya, UMGANGATHO OMKHULU useke uthungelwano lokuthengisa oluqolileyo kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla kwihlabathi liphela, kunye neemveliso zethu ezinokhuphiswano kunye nenkqubo yokuyila esekwe kwimarike.